fitehirizana ovy - magazine "Potato System"
Tena Label pototra ny tahiry
Label: pototra ny tahiry
Naterina tany Sakhalin ny ovy roapolo taonina voalohany nambolena tao Iturup (Nosy Kuril). Ho an'ny Iturup, malaza amin'ny trondro sy caviar, saingy amin'ny ...
Ny trano fitehirizana ovy vaovao ao amin'ny toeram-pambolena Diana (distrikan'i Shklov, faritra Mogilev) dia amboarina amin'ny alàlan'ny teknolojia avo indrindra. Izy io dia amboarina amin'ny fijerena ny fivoaran'ny famokarana ao amin'ny ...
Nanangana trano fitehirizana ovy vaovao ny Continental Farmers Group. Ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa dia mitentina 111,4 tapitrisa UAH. Fitehirizana ovy manana velaran-tany mihoatra ny 6 ...
Maria Erokhova, mpikaroka zandriny, Departemantan'ny aretina ovy sy legioma, Ivon-toerana fikarohana Rosiana momba ny fisiôlôjia Maria Kuznetsova, Lehiben'ny loha. sampana, sampana aretina ovy sy ...
Ny fametrahana tsipika famokarana fries frantsay dia vita ao amin'ny Cannery Tolochin (Repoblikan'i Belarus). Aorian'ny fandefasana azy, ny orinasa dia afaka mampihatra tsara ...
Ao amin'ny faritry ny orinasa fambolena Mechta any amin'ny faritra Kostroma, hatsangana trano fitehirizana vokatra 2000 taonina. Governoran'ny Faritra Kostroma Sergei Sitnikov ...
Fahadiovana fitehirizana, famonoana otrikaretina alohan'ny enta-mavesatra
Sergey Banadysev, Doctor of Science momba ny fambolena, SGC DokaGene Ny kolontsaina mamokatra avo lenta dia singa iray lehibe mampiavaka ny fitehirizana ovy. Ny orinasa dia tsy maintsy ...
Ny iray amin'ireo mari-pahaizana dinihina rehefa mifidy karazana dia ny fitazonana ny kalitao. Ankoatra ny maha-maniry ny ovy dia mila tehirizina ihany koa izy ireo. Inona ...
Tajikistan dia mikasa ny hampiasa ny famokarana ny tongolo ary ny famokarana ovy
Amin'ny 2021, ny Faritany Stavropol dia hampiasa vola 3 miliara roubles amin'ny rafitra fanarenana